FAQ - Qalabka Madadaalada Weyn ee Co., Ltd.
1. Ma waxaad tahay soo saare?
Haa. Waxaan nahay soo saare xirfadle ah oo ku takhasusay qalabka ciyaarta iyo wixii la xiriira tan iyo 2010.
2. Waa maxay muddada lacag bixintaadu?
Waqtigayaga lacag bixintayada caadiga ah waa 30% sida deebaajiga, isku dheelitirka T / T kahor bixinta. Amarka muunad ahaan, waxaan aqbalnaa lacag bixinta PayPal, Western Union, MoneyGram.
3. Waa maxay waqtiga gaarsiintaadu?
Waqtiga keenida waxay ku xirnaan doontaa tirada dalabkaaga iyo inta amar aan soconeyno. Badanaa waqtiga dhalmada waa 15-30 maalmood. Mararka qaar waa inaanu kordhinaa waqtiga gudbinta maadaama aan amarro waaweyn ka helno dowladda. Haddii aad u baahatid qaar ka mid ah muunado, waxaan ku dhammeyn karnaa 7 maalmood haddii ay degdeg tahay.
4. Muxuu yahay sharciga nabdoon ee badeecadaada?
Waxaan tixgalin doonaa nidaamka nabdoonaanta (ASTM F1487, EN1176, EN71, EN 16630) marka la horumariyo, naqshadeeyo, sameeysto, iyo rakibida alaabada. Waxyaabahayagu waxay heleen shirkad iyo macaamiisheena shahaadooyin badan.
5. Alaabada ma u diri kartaa meeshayda?
Xaqiiqdi, waxaan kaa caawin karnaa diyaarinta gaarsiinta wadankaaga. Laakiin sida caadiga ah waxaan u diyaarin karnaa gaarsiinta dekada macaamiisha ee ugu dhow wadankooda macmiishaana waxay diyaarin doonaan gaarsiinta dekada ilaa meeshooda.
6. Miyaan iska rakibi karaa alaabooyinka lafteyda?
Haa. Waxaan ku siin doonaa tilmaamaha rakibaadda oo faahfaahsan. Dhamaan macaamiisheenna ayaa sameyn kara garoonkooda laftooda iyagoo gacan ka helaya annaga. Laakiin garoon weyn oo gudaha ah oo in kabadan 200 mitir murabac ah, waxaa fiican inaad weydiisato shaqaalaheena inuu kaa caawiyo rakibida. Laga yaabee in qiimuhu xoogaa yara bato laakiin waqtiga ayuu gaabin doonaa.
Wixii macluumaad dheeraad ah, ku soo dhawoow nala soo xiriir hadda!